ONG « Ny fanahy maha olona » Hanampy amin’ny fitsaboana an’i Karenne Ramarojaona
Nanambara ny faran`ny herinandro lasa teo ny Fikambanana « Ny Fanahy maha Olona » fa hanampy amin’ny fandraisana an-tanana ny fitsaboana an’i Karenne Ramarojaona izay tovovavy kamboty tratry ny aretina ny voany roa.
Eo amin’ny dingana fahadimy ny aretin’ity tovovavy ity ka mila fandidiana sy fanoloana vao atao any ivelany izy. Noho ny havesatry ny sarany ilaina amin’ny fitsaboana, izay mitentina 80 tapitrisa ariary, dia nisy antso tolo-tanana tamin’ny alalan’ny tambajotran-tserasera natao ho fanampiana azy. Ho famaliana ny antso no nahatonga ny fikambanana « Ny Fanahy no maha olona » hifanampy amin’ny fitsaboana azy izay hatao any India. Hisy hetsika ara-panatanjahantena hotontosaina ao amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena, Mahamasina, miaraka amin’i Eric Favre sy i Morgan Aste, mpanao Body Building fanta-daza eran-tany, anio alatsinainy mba ho fandraisana anjara amin’ny tolo-tanana, hoy ny filoha mpanorina, Ny Rado Rafalimanana. Ankoatr`izay, hisy ihany koa “gala” anasana ny malala-tanana rehetra, hotontosaina amin’io alatsinainy io ihany fa saingy ny hariva ao amin’ny Hotel Colbert. Nomarihan`ny filohan`ny fikambanana fa hatolotra an’i Karenne izay vola voaangona rehetra amin’ireo hetsika voalaza ireo. Ny tsy feno amin’ny sarany dia horaisin`ny fikambanana an-tanana. Eo ampiandrasana ny fotoana ahafahana mandefa azy any ivelany anefa dia manentana izay terem-panahy ka afaka manolotra voa ho an’i Karenne ny fikambanana « Ny Fanahy maha Olona » mba hifanatona aminy.